Wararka Maanta: Talaado, Jun 4 , 2013-CAYAARAHA SOMALILAND: Kooxda Kubadda Gacanta ee Maroodi-jeex oo 41 dhibcood kaga badiyey Kooxdii Gobolka Hawd
Gobolka Maroodi jeex ayaa ku badiyey 41 dhibcood, halka gobolka Hawdna uu keenay 27 dhibcood, waxaanay guushu raacday gobolka Maroodi jeex.
Sanadkii hore waxa tartamadii kala duwanaa ee goboladda kaalinta kowaad ku soo baxay gobolka Maroodi jeex oo qaatay koobabkii kubadda Cagta, Gacanta iyo orodkaba, haseyeeshee sanadkan lama saadaalin karo maadaama oo goboladda ka qaybgalaya tartanku uu aad u badan yihiin, isla markaana mid waliba ku dadaalayo sidii uu kaalinta kowaad u gali lahaa.
Dhinaca kale, gobolka Hawd ayaa shalay 2-1 ku kaga badiyey xulka gobolka Badhan.
Ciyaarti shalay oo ahayd mid aad u adag xamaasadeeddana wadata, waxay labadda gobolka soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo ismari waa, haseyeeshee daqiiqadihii dambe ayey u suurtogashay inay gobolka Hawd la caraabaan guusha, iyagoo 2-1 kaga badiyey xulka gobolka Badhan.
Si kastaba ha ahaatee, waxa si rasmi ah wali usocda tartankii goboladda Somaliland, waxaanu gobol kasta isku dayeyaa inuu noqdo xulka koobka qaadi doonna.